NamasteNEPALI.com: 'मेरो जस्तो खत्तम भाग्य कस्को होला र ?'
'मेरो जस्तो खत्तम भाग्य कस्को होला र ?'
सामुमा बसेकी छन् - डोल्मा शेर्पा । आँसुले भिजेका परेली पुछ्दै र गढेको स्वर उठाउन खोज्दै डोल्मा सुनाइरहेकी छन्, एउटा वृत्तान्त— छोरीको जन्म, हारेको कर्म । डोल्माकै शब्दमा ‘अनाहकको अभियोग’ बेहोर्दै खाडीको कुवेतमा १० वर्षसम्म जेल सजाय बेहोर्नुपर्दा उनकै जीवनमा पनि धेरै कुरा फेरबदल भएको रहेछ । जस्तो : अहिले उनी आफ्नै शेर्पा भाषा राम्ररी बोल्न नसक्ने भएकी रहिछन्, कसोकसो सिकेको नेपाली पनि ‘हिन्दीयुक्त’ भएको रहेछ । अरबी लवजका कारण बरु वाक्यैपिच्छे उनी भन्न थालेकी रहिछन् - इन्साल्ला... !
डोल्माको दाबी छ— म निर्दोष छु भन्ने कुरा भगवान् बुद्ध र पशुपतिनाथलाई थाहा छ। तर, बाहिर कुरा हुँदोरहेछ— ‘डोल्मा शेर्पाको अनुहार हेर्न पाए पनि हुन्थ्यो, फिलिपिनोको घाँटी निचोरेर आएको रे...।’ हो, यसोभन्दा भने डोल्माको मन दुख्ने रहेछ, त्यही कारण उनी रिसाउँदी रहिछन् । दूतावासले र अरू सरकारी संस्थाले कहिल्यै पनि ‘डोल्मालाई परिबन्दमा पारिएको’ भनेर नभनेकोमा र सधैंभरि ‘डोल्माले फिलिपिनो खद्दामालाई मारेको’ भनेर बोल्ने गरेकोमा ‘यथार्थ कसैले–कहिल्यै बुझ्नै नसकेको अथवा नचाहेको’ उनलाई लाग्दो रहेछ । जेलमा कोही उनलाई हेरेर ‘बिचरा’ भन्दै चुक्चुकाउँदा रहेछन्, कोही भने अपराध नगरेको भए किन जेल आउनु र ? भन्ने रहेछन् ।
यति भनेर डोल्माले आफूलाई जीवन दिने कुवेतस्थित पाकिस्तानी नागरिक सागिर आमेद, मित्र सिंजाली दाइ र काठमाडौंका केसाङ छेतेनलाई हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहिन् । जेलबाट खाली हात फर्किंदै गर्दा केही चक्लेटका प्याकेट दिने कैदी दिदीबहिनी र ५ हजार नेपाली रुपैयाँ, एक जोर कुर्ता–सुरुवाल र एक जोर चप्पल उपहार दिने सागिर सापको परिवारलाई सम्झेर भन्न चाहिन्— इन्साल्ला...!